Banaanbax ka dhacay Sweden Stockholm
May 2, 2007: Banaan bax wayn oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa ka dhacay Wadanka Sweden Magaalada Stockholm. Banaan baxaas oo looga soo horjeeday xasuuqa iyo faragelinta ay ku hayaan ciidamda itoobiya wadanka Soomaaliya.
Kasoo qayb galayaasha yaa watay boorar ay ku muujinayaan xasuuqa ay gaysteen ciidamada Ethoipia iyo kuwa dawlada federalka ah.
Banaan baxaas waxaa ka qayb qaatay Shaqaalaha Wadankaan waxaana lagu beegay 1 may oo ah maalinta shaqaalaha aduunka. Shaqaalaha ayaa waqtigooda ugu taba rucay dadka dulman iyagoo indhaha caalamka ku soo jeediyay xasuuqa lagu hayo umadda Soomaaliyeed iyo sida laysaga indho tirayo xasuuqaas.
Banaan baxayaashu waxay wateen boorar ay ku xardhan yihiin qoraal ay ka mid yihiin Goerge Bush waa dhiigyo cab in maxkamad la horekeeno mudan, Bush waa argagiso, Maato lays mellez, Mellez waa dilaa maxkamada hala keeno, somaliya wax dawalad ah oo ka jira malahan iyo eraryo kale oo xamaasan leh.
Waxaa banaan baxa hogaamiyay dadka u dooda xaquuqda aadanaha iyo dadka jecel nabada kuwaasoo cod baahiyaal dadka reer stockholm ee usoo daawasho tagay banaan baxaan maqashiiyay qadiyada Somaliya.
Banaan baxa yaashi waxay socod ka soo bilaabeen halka lagu magacaabo Medborgeplats iyagoo lug ku tahay halka loo yaqaan Beerta bortooyada (Kunstrag�den). Waxaa laga soo jeediyay halkaas qudbado xamaasad leh iyo warbixino sida xuquuqda aadana uu ugu tunto Maraykanku asagoo mar kasta xaqiiqda iska indho saaba islamarkaan adeegsada wadamo sida Ethiopia si uu dadka maraykanka u qaldo. Waxaa loogu baaqay dawlada maraykanka in auy tixgeliso xaquuqda aadanaha ogolaatana in nadab aduunka lagu wada noolaado.
Waxaa halkaas laga sheegay in aan xasuuqa dhacaya laysaga hari doonin goor ay ahaataba dadka gaystay maxkada caalami ah la horkeeni doono.
Dadwayne aad u fara badan oo halkaas isugu soo baxay ayaa waxaa si wayn uga dhex muuqday calanka Jamhuuriyada soomaliya iyo halku dhegyo badan oo lagu cambaaraynayo xasuuq loo geystay dadka shacabka ah.
Banaan baxaan wuxuu daba socdaa kadib xasuuq iyo bur bur ay gaysteen Ciidama Ethopia kuwaasoo maadiic si aan kala sooc lahayn ula dhacay degaanada dadka rayidka ah u badan yihiin magaalada Muqdisho.
Waa markii ugu horeysay ee banaan bax ay ka qayb galaan dad ajaanib ah oo looga hadlayo qadiyada soomaliya tan iyo markii ay ka baxday meesha dawladii dhexe ee soomaliya.
Cali Dahir Ahmed
La xiriir: kulane31@gmail.com